पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्ड शुक्रबारमात्र असञ्चालन आउने – SaipalNews.com
Thursday, 13, August, 2020	info@saipalnews.com
पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्ड शुक्रबारमात्र असञ्चालन आउने
चितवन ८ साउन । राजधानी काठमाडौँसँग यातायात सम्बन्धबिच्छेद भएको पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्ड शुक्रबार दिउँसोसम्ममा सञ्चालनमा आउने गरि काम अघि बढाइएको छ । सो सडकखण्डको चितवन र धादिङ जोड्ने मौवाखोलाको पुलसँगैको भाग बगाएपछि राजमार्ग गत सोमबारबाट पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख इ कृष्णराज अधिकारीका अनुसार मौवाखोलामा बुधबार बिहान खोला मूलधारमा पठाएर जालीको पर्खाल लगाउन थालिएको छ । विङवाल अर्थात पखेटे पर्खाल लगाउने काम राति अबेरसम्म गरिएको थियो । दिनभर ४२ जना मजदूरले पर्खाल लगाउने काम गरेका थिए । दिउँसोको समयमा नेपाली सेनाले पनि सहयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आज बिहान सबेरैदेखि कामलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नुवाकोटबाट जालि झिकाएर स्थानीय ढुङ्गा भरेर पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ । दिनभरमा धेरै काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “थप पानीले समस्या नवनाएमा शुक्रबार दिउँसोसम्ममा पृथ्वीराजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।” सो सडकखण्डको मुग्लिनबाट नौबिसेसम्म २०० भन्दा बढी पहिरा खसेका थिए । ती पहिरो पन्छाउने र मर्मतसम्भार गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राजधानी प्रवेश गर्ने र बाहिरिने प्रमुख मार्ग भएकाले सबैको ध्यान, चासो र सहयोग जुटेकै कारण कामले तीव्रता पाएको छ ।
ठाउँठाउँमा एकतर्फी सडक खुलाइएको छ । ती ठाउँमा मालबाहक ट्रक अव्यवस्थित ढङ्गले पार्किङ हुँदा काममा अप्ठ्यारो भएको उहाँले बताउनुभयो । यता नारायणग–मुग्लिन सडकखण्डको चारकिलो र १६ किलोमा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । सडक विभागले हालका लागि राजधानी काठमाडौँ जान त्रिभुवन राजपथ प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । धेरै दिनसम्म राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा अत्यावश्यक र मालबाहक सवारी प्रभावित बनेका छन् । यही साउन ४ गतेबाट देशैभर अविरल वर्षा भइरहेकोमा बुधबार दिउँसोबाट यस क्षेत्रमा वर्षा कम हुँदै आएको छ ।
सप्तरीमा बस पल्टियो १ जनाको मृत्यु, ८ घाइते
दशैँ घरमा विधिपूर्वक जमरा राखियो
काङ्ग्रेसको लोकप्रियतामा प्रश्न चिह्न
पूर्व राष्ट्रपतिको कोरोनाबाट निधनको खबर परिवारद्वारा खण्डन
मिर्गौला तस्कर धरौटीमा छुटे, एसएसपीको चलखेल
सीमा विवादको विषयमा नेपाल-भारतबीच वार्ता हुने !
गण्डकी प्रदेशका कोरोना अस्पतालमा चरम लापरबाही
दाङमा आंशिक प्राध्यापकहरूले जलाए क्याम्पसका कुर्सी टेबल
धनगढी लकडाउन सुरु
नेपालमा आज थप ३३८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि
मन्त्रीपरिषको निर्णय मुख्यसचिवकै गोजीमाः लकडाउन नहुने,नाकामा कडाइ
गोंगबु हत्या प्रकरणः चितवनबाट एक महिला पक्राउ
वार्ताका लागि २३ वटा असन्तुष्ट एवम् द्वन्द्वरत पक्षको पहिचान
गृह, ऊर्जा र वन मन्त्रीबीच आयोजना फुकाउने सहमति
मन्त्री फेर्न ओली–प्रचण्डको गोप्य भेट ! फेरिनेमा को को छन् ?
डुङगा दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, दुई घाइते